LG G2 ကို Android Lollipop Official Stock သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း | Androidsis
တစ် ဦး ၏ကိုင်ဆောင်သူပေမယ့် LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D802 ရဲ့ကျန်ရှိနေသေးသောအသုံးပြုသူအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြပါစို့ သင်၏ terminal များကို Android Lollipop သို့ update လုပ်ပါAndroid အတွက်ဖိုရမ်အမျိုးမျိုးတွင်တင်ထားသောမူရင်း Rom Stock ကို အခြေခံ၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ချက်ထားသောချက်ပြုတ်ထားသော Roms များမှတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင် update လုပ်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများရှိပြီးသည့်အခါ၎င်းသည်လက်တွေ့ကျမှုနှင့်ပိုမိုများပြားလာပုံရသည်။
နောက်ပို့စ်တစ်ခုမှာမင်းကိုသင်ပေးမယ် LG G2 ကို Android Lollipop Official Stock သို့အဆင့်မြှင့်တင် ၏အသင်းအားဖြင့်ချက်ပြုတ်တဲ့ Rom မှတဆင့် မြဝတီ။ Android ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်၌ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သောအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် v2 ဗားရှင်းတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည် XDA။ သင်လိုချင်လျှင်သင်သိ LG G2 ကို Android Lollipop Official Stock 5.0.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်, ငါဒီ post ကိုလက်လွတ်မခံရန်အကြံပြုလိုတယ်။ သင်မည်သို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကို ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အတွင်းရှင်းပြရန်သင်ခန်းစာအနေနှင့်လိုအပ်သည်။
1 LG G2 ကို Cookie Rom ကိုအသုံးပြုပြီး Android Official Lollipop Stock သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းမပြုမီထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
2 LG G2 ကို Cookie Rom သုံး၍ Android Lollipop Official Stock သို့အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
3 Rom မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နည်းလမ်း
LG G2 ကို Cookie Rom ကိုအသုံးပြုပြီး Android Official Lollipop Stock သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းမပြုမီထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
ပထမဆုံးပြောတာကသူတို့ကိုပြောပြဖို့ပါ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောသင်ခန်းစာသည်နိုင်ငံတကာ D802 အတွက်ရည်ရွယ်သည်LG G2 မှလွဲ၍ အခြားမော်ဒယ်တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုလိုသူမည်သူမဆိုတရားဝင် XDA ဖိုရမ်ကိုအသုံးပြုရမည် အဆိုပါ Rom ၏ချည်၌တည်၏ သင်၏မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုမည်သည့်နေရာတွင်သင်ရှာလိမ့်မည်။
တစ်ဦးရှိ LG G2 အမျိုးအစား D802
terminal ကအဆင်ပြေမှာပါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Recovery ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပါပြီအကောင်းဆုံးကတော့ TWRP ။
အထက်ဖော်ပြပါ Recovery ကို version 2.8.2.0 နှင့်အထက်သို့မွမ်းမံရမည်။ ဗားရှင်း 2.8.5.1 အကြံပြုခဲ့သည် သင်ဒီမှာမှ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာကိုချန်ထားလိုက်တယ် ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို update လုပ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်း.
ပြုပါ backup EFS ဖိုင်တွဲ.
တစ်ဦးရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလည်ပတ်မှုစနစ်၏ nandroid backup.
100 x 100 အထိဘက်ထရီကိုအားသွင်းပါ
LG G2 ကို Cookie Rom သုံး၍ Android Lollipop Official Stock သို့အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
ဒီစိတ်လှုပ်ရှား install လုပ်ဖို့ တရားဝင် Stock Lollipop firmware ကို အခြေခံ၍ ချက်ပြုတ်ထားသော romငါတို့သာလိုအပ်လိမ့်မယ် ဒီ compressed ဖိုင်ကို ZIP format နဲ့ download လုပ်ပါ ပြီးတော့ LG G2 ရဲ့ internal memory ထဲကိုကူးထည့်ပါ သို့မဟုတ် Pen Drive နှင့် USB OTG ဆက်သွယ်မှုများမှတဆင့်။ ဖိုင်ကို download လုပ်ရန်ပေါ်လာသောပထမဆုံး ၀ င်းဒိုးကိုပိတ်ရန်လုံလောက်ပေလိမ့်မည် ထို့နောက်အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးစက္ကန့် ၃၀ စောင့်ပါပြီးနောက်ဒေါင်းလုပ်သည်အလိုအလျောက်စတင်လိမ့်မည်။
မှတ်သားထားရမည့်အချက်မှာ LG Stock သည်တရားဝင်စတော့အိတ်၊ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်မည့် ZIP ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည် အလေးချိန် ၁.၆ Gb ရှိသည်.
ဖိုင်ကို download လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကို internal memory သိုမဟုတ် USB OTG မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ထားသော pen drive ထဲသို့ကူးယူပြီးအောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 နိုင်ငံတကာပုံစံတွင် Rom ကို flash လုပ်ပါ.
ဤနေရာတွင်ရှင်းပြထားသောလိုအပ်ချက်များအားလုံးပြည့်စုံပြီး ROM ZIP ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့် ကျနော်တို့ Recovery Mode ကိုပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မယ် ငါအောက်တွင်ငါမှတ်ချက်ပေးရန်သောစာ၌မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်:
ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ သုတ်ထိုအခါ အဆင့်မြင့် Wipe နှင့် sdcard သို့မဟုတ် terminal ၏ internal memory မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုမှတ်သားသည်။ Cache၊ ဒေတာ၊ စနစ်နှင့် Dalvik ။
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install ကျွန်ုပ်တို့ Rom Rom ၏ zip ကိုရွေးပြီး TWRP ဘားကိုလျှော ချ၍ Flash လုပ်သည်။
ယခု reboot system ကို.
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်ကြ၏ terminal ကိုပြန်လည်စတင်ရန်စိတ်ရှည်ရှည်နှင့်စောင့်ပါ ကျွန်တော်တို့ကို Android Lollipop configuration screen အသစ်ပြပါ။ ဤပထမ reboot သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ထက်များစွာကြာသည်ကိုသတိရပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စနစ်ကိုတပ်ဆင်ရုံသာဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် boot လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ terminal သည် ၁၅ မိနစ်ကျော် boot သို့မဟုတ် boot မျက်နှာပြင်တွင်ရှိနေပါက Power ခလုတ်ကို ၇ စက္ကန့်ခန့်ဖိထားပြီး restart ကိုဆက်လုပ်ပါမည်။ ထိုအခါသင်သည်ပုံမှန်စတင်သင့်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » [ROM] Cookie Rom ကိုသုံးပြီး LG G2 ကို Android Lollipop တရားဝင်စတော့အိတ်သို့မွမ်းမံနည်း
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဖရန်စစ္စကို၊ ဒီရမ်မှာ FM ရေဒီယိုရှိသလား၊ ကင်မရာရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အမြန်နှုန်းတိုးတက်မှုတို့ရှိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်း၊ မင်းရှာပြီးကောင်းပြီ၊ မင်းပို့လိုက်သော link သည်ကိုရီးယားဗားရှင်းကိုသာအထောက်အပံ့ပေးသော v2 ဖြစ်သည်ထင်သောကြောင့်၊ ငါ ထပ်မံ၍ ငါထင်မိသည်။ သို့သော်ငါမှန်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ g2 ထည့်သွင်းလိုက်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျတစ် ဦး brik ဖြစ်ပေါ်စေရန်။
သင်၏ G2 တွင်သင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သော Fracisco၊ ၎င်းကိုအခြားဒေါင်းလုတ်ဆွဲသူသို့တင်ပို့နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုလက်ခံထားသည့်အလွန်နှေးကွေးသည်။ မင်္ဂလာပါ
ကျွန်ုပ်မိုဘိုင်းကုန်သွားသောကြောင့်ဤသည်ကိုထည့်သွင်းမထားပါနှင့် D802 မော်ဒယ်အတွက်ဗားရှင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်မိုဘိုင်းကိုမဖွင့်ပါ၊ အားသွင်းစရာမလိုသကဲ့သို့ကွန်ပျူတာကမိုဘိုင်းလ်ကိုလည်းအသိအမှတ်မပြုပါ။ အမှိုက်ပုံထဲမှာ
David, သူ့အားကယ်တင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ JTAG လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ Cloudy V2 နှင့်ဤကဲ့သို့သောအရာသည်ယခုသင်လုပ်ပေးသောမည်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်မဆိုကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ huev0dur0 JTAG ၏တန်ဖိုးသည်အဘယ်နည်း။ မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်လေ့ရှိသနည်း၊ ၎င်းတို့အတွက်မည်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ပေးလေ့ရှိသနည်း၊ ကျွန်ုပ်၌ paperweight mobile ရှိသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Juan Barbato ဟုသူကပြောသည်
ဒီ ROM ကိုမထည့်သွင်းပါနဲ့။
သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုအုတ်တစ်ခုအဖြစ်ထားလိုက်သည်။ androidsis သည်အန္တရာယ်ရှိသောဖိုင်များသို့လင့်ခ်များတင်ရန်မည်သို့ခွင့်ပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ငါသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောခဲ့ကြသည်ထင် !!!
Juan Barbato ကိုပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ EYE !!!!, ကျွန်ုပ်သည် ROM များထည့်သွင်းခြင်း၏ရှင်းလင်းသောမြည်းဖြစ်သည်။ ဤ POST ကိုမျက်စိကန်းစွာယုံကြည်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းအားပိတ်ဆို့ခဲ့သည် !!!! * .TOT ဖိုင်တစ်ခုမှ RECOVERY, ROOT ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်ပြီးကံကောင်းတာကကျွန်ုပ်တွင်ရှိသော nandroid backup ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့ ၄ နာရီလောက်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်၊ ငါစက္ကူအလေးချိန်နီးပါးရှိတယ်။
သင်အမြဲတမ်းမိုဘိုင်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အုတ်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးထားခဲ့ပြီး၊ ဖိုရမ်များ (ဖတ်ပါ) နှင့် LG Tools မှ ကျေးဇူးတင်၍ ၎င်းကို Stock Rom မှတဆင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
ပတ်ပတ်လည် messing မပြုမီ, Backup လုပ်, သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
Simon Neri ဟုသူကပြောသည်
1490 fastboot mode ကိုစတင်ခဲ့သည်
Simon Neri အားပြန်ပြောပါ